भूपाल राई - कान्तिपुर समाचार
भूपाल राईका लेखहरु :
नामबारे यो लेखोट सुरु गर्नुअघि, चार कुरा घोषणा गरिहालूँ । एक, प्रकारान्तरले यो मेरो आफ्नै नामको पृष्ठभावमा निर्मित लेखोट हो । दुई, मेरो नाम मेरै लागि एक असम्मत नाम हो । तीन, मलाई लाग्दैन कि यो मेरो आनुवांशिकतालाई विम्बित गर्ने आफ्नै नाम हो । चार, न म यतिखेर मेरो नामलाई आत्मसात गरिरहेको छु न यसको अविच्छिन्नताबाट टाढा भाग्नै सकिरहेछु ।
जन्मदिन नभएको मान्छे !
बुद्व जन्मिनासाथ सात पाइला हिँडेका थिए रे !
रूपा सुनारले खेपेको जातीय विभेदको घटना प्रकाशमा आएपछि कवि भूपाल राईलाई बोध भयो– उनीभित्र पनि एउटा दमित घाउ कतै दुखिरहेको रै’छ । करिब ४५ वर्षअघि राईले भोगेको विभेद र त्यस विभेदको ‘ऐया’ माथिको एक टिप्पणी :
अक्षरका वर्जित यात्रीहरू
तपाईं यसलाई नपढ्न सक्नुहुन्छ ।हो, नपढ्न सक्नुहुन्छ । तर, तपाईंले नपढ्दैमा मैले नलेख्न सक्छु, त्यस्तो सोच्न सक्नुहुन्न । नपढ्नु तपाईंले नलडी प्राप्त गर्नुभएको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ होला । तर, लेख्नु अधिकारको कुरा मात्र होइन । त्यो अरू पनि केही हो ।
राइन किनारमा ‘शेर्पा दाइ’
आयरल्यान्डबाट छोरा रिदुमको फोन आएको दिन यस्तो लाग्छ, घरमा अचानक कोभिड– १९ को खोप आइपुगेको छ । ऊ सकुशल रहेको जानकारीले पनि हामीलाई त्यस्तै महसुस दिलाउँछ कि मानौँ त्यो खोप उसकै मुस्कानमा छ । छोराले देश छाडेको लगभग सात वर्षको लामो अन्तरालमा यत्तिको चिन्तित हामी सायदै थियौँ । हामी मात्र होइन देश–विदेशमा रहने आफ्ना सन्तानप्रति हरेक अभिभावक यतिखेर समान मनोदशामा छन् ।
बाजेले सोध्नुभो, ‘राजा सन्चै छन् ?’
मेरा बाजे सबैका लागि असल हुनुहुन्नथ्यो । यसो भन्दा मलाई कुनै लज्जाबोध हुँदैन । तर, त्यस्तो खराब पनि होइन, जसको बयान सधैँ अप्रिय होस् । मैले आज बाजेका नाममा थोरै प्रिय कुराहरू पनि गर्नु छ, जसलाई अप्रिय शब्दभण्डारबाट निचोरेर निकाल्नु छ । र, यी सबै गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ सर्वप्रथम काठमाडौं उपत्यकाका हाल सालैका केही सांस्कृतिक घटनाहरूको सिलसिला जोड्नु छ ।
त्यसो त यो कथा नलेखे पनि हुने हो । जस्तो दुनियाँमा नलेखे पनि हुने धेरै कथा छन् । तिनीहरू जो लेखिएका छन्, त्यसैले मात्र ती कथा बनेका छन् । नलेखिएका कति कथा होलान्, जो सायद व्यथाका रूपमा लुकेर बसेका होलान् । तर, यो कथा जुन यहाँ लेखिएको छ, व्यथा विरेचनको अकिञ्चन प्रयास वा आत्मतुष्टिको नितान्त निजी विज्ञापन मात्र होइन ।
आमालाई कोरोना के हो थाहा भएन । त्यसको कैफियत हात उहाँसम्म पुगेन पनि । तर, त्यसलाई सम्बोधन नगरी आजका कुनै पनि घटना पूरा हुँदैन भन्ने यथार्थबाट म पूरापूर जानकार छु । त्यसैले कोरोनाकालकै छायामुनि म यतिखेर आमाको दुःखान्त यादमा छु ।
चिहानमा कदमको रूख
जन्मको तहगत व्यवस्थाअनुसार, म मेरो परिवारको कान्छो सदस्य होइन । कम्तीमा मैले होस सम्हालेदेखि नै म त्यो थिइनँ । तर, लगभग ७–८ वर्षको उमेरमा पुगेपछि मलाई मेरो परिवारले एक्कासि ‘कान्छा’ भनी बोलाउन थाले । पछि गाउँ–समाजले पनि त्यसैलाई अनुसरण गर्ने भइहाल्यो ।